Semalt - एक विश्व प्रसिद्ध डिजिटल एजेंसी
Semalt एक विश्व-प्रसिद्ध डिजिटल एजेन्सी हो जसले खोज इञ्जिन अनुकूलन र वेबसाइट एनालिटिक्समा विशेषज्ञता दिन्छ। त्यस क्षणदेखि जब तपाईं तिनीहरूको वेबसाइटमा क्लिक गर्नुहुन्छ, यो स्पष्ट छ कि उनीहरूसँग ध्यानपूर्वक पार्स गरिएको सामग्री, कार्यहरूमा प्रत्यक्ष कल, र र a्गको प्रयोगको साथ अनलाइन ध्यान कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने बारे गहिरो समझ छ। पूरा भएका पेशेवरहरूको टोलीसँग जुन बहु भाषाहरूमा प्रवाहित हुन्छन, यो सजिलैसँग बुझ्न मिल्छ किन Semalt सँग सयौं सकारात्मक समीक्षा र नतीजाहरू विश्वभर छन्। ओह, र तपाईं टर्बो कछुएलाई हाई भन्न बिर्सनुहुन्न!
हामी उनीहरूको प्याकेजमा जानु भन्दा पहिले उनीहरूको सबै कुरा बिग्रौं।
खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन (साथै एसईओ पनि भनिन्छ) सक्रिय ईन्टरनेटमा तपाईंको वेबसाइटमा निर्देशित ट्राफिकलाई खोजी ईन्जिनमा तपाईंको पृष्ठको दृश्यता बढाउँदै सक्रिय बनाउँदैछ। एक प्रयोगकर्ताको खोज इञ्जिन परिणाममा देखा पर्न को लागी, तपाइँको पृष्ठ अनुक्रमणिका हुन आवश्यक छ। अनुक्रमणिका खोज ईन्जिनको प्रक्रिया हो जुन स्पाइडरसँग जानकारी संकलन गर्दछ (जसलाई एक बोट वा क्रलर पनि भनिन्छ) ताकि यसले डाटाबेसमा भएका सबै कुरा बिरूद्ध प्रासंगिकताको लागि सामग्री व्यवस्थित गर्न सक्दछ। माकुरो तपाईंको पृष्ठ खोज्न क्रममा, उनीहरूले तपाईंको लिंक पत्ता लगाउन आवश्यक पर्दछ जब यो अर्को वेबसाइटको अन्वेषण गर्दैछ। यस खोजलाई ब्याकलि Back्क भनिन्छ।
एक पटक स्पाइडरले तपाईंको पृष्ठ फेला पारे पछि, यसले प्रत्येक आउन्स जानकारी स information्कलन गर्दछ यसले भेट्टाउन सक्दछ जब सम्म यो तपाईंको साइटबाट ब्याकलिked्क हुँदैन। खोजी ईन्जिनले तपाईंको सामग्रीलाई सान्दर्भिक स्कोर दिन्छ, जसले तपाईंको SERP (खोज इञ्जिन परिणाम पृष्ठहरू) प्लेसमेन्टमा मद्दत पुर्‍याउँछ वा हानी गर्दछ। जब एक खोज इञ्जिनले तपाइँको पृष्ठलाई दर्जा दिइरहेको छ, यसले निम्न वस्तुहरूको न्याय गर्नेछ:
सामग्री भाषा: के प्रयोगकर्ताले तपाईंको सामग्री पढ्न सक्दछ?
सामग्री प्रासंगिकता: के तपाइँको सामग्री खोज शब्दसँग सान्दर्भिक छ?
मुख्य पाठ: तपाइँको सामग्री खोजी शब्दसँग कति मिल्छ?
पृष्ठ शीर्षक: तपाईको लेखको केन्द्र बिन्दु के हो?
छविहरू र ग्राफिक्स: के दृश्य सामग्रीले तपाईंको सामग्रीलाई समर्थन गर्दछ?
स्थान: के तपाईंको सामग्री स्थान निर्भर छ?
तपाइँको सबै एसईओ सहि पंक्तिबद्ध संग, तपाइँ तपाइँको सम्भावित ग्राहकहरु को एक स्थिर धारा को लागी आफ्नो वेबसाइट को माध्यम मा क्लिक गर्नु पर्छ। तर कसरी तपाईं अनिश्चितकालको लागि भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईंको वेबसाईटले उसको लक्षित दर्शकहरूमा पुग्छ? त्यो मात्र होईन, तर तपाइँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि यदि तपाइँको दर्शकले तपाइँले चाहानुभएको तरिकाले प्रतिक्रिया गरिरहेको छ? अवश्य, हामी जहिले पनि तपाईंको बिक्री रिपोर्ट हेर्न सक्दछौं र त्यसको न्याय गर्न सक्छौं। तर सबै बिक्री रिपोर्ट तपाईंलाई बताउँछ कति पैसा बनाएको छ। यदि तपाईं वास्तवमै ग्राहकले तपाईंको वेबसाइटमा कसरी प्रतिक्रिया गर्दैछ भनेर बुझ्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले वेब एनालिटिक्स कार्यक्रममा गहिरो खन्नु पर्नेछ।
वेब एनालिटिक्स तपाईंको दर्शकको बानी बुझ्ने इच्छाको साथ रिपोर्टलाई नाप्न, संकलन गर्न र विश्लेषण गर्न प्रयोग गरिन्छ ताकि तपाईं आफ्नो वेबसाइटलाई राम्रोसँग अप्टिमेट गर्न सक्नुहुनेछ। यी कार्यक्रमहरूले तपाईंलाई निम्न वस्तुहरूमा मुख्य जानकारी दिनेछ।
एनालिटिक्स क्लिक गर्नुहोस्
अद्वितीय भ्रमणको कुल संख्या
दोहोरिने भ्रमणको कुल संख्या
त्यो मार्फत जानको लागि धेरै जानकारीहरू छन्! तर यो तपाईको लागि यो महत्वपूर्ण छ किनकि यसले तपाइँको वेब उपस्थितिलाई पूर्णरूपमा अप्टिमेट गर्न मद्दत गर्दछ। वेब एनालिटिक्स को साथ, तपाईं निम्न मा एक सटीक निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ:
कुन साइटले तपाइँको साइटमा यातायात ड्राइभ गरिरहेको छ निर्णय गर्नुहोस्।
कुन उत्पादनले सब भन्दा ध्यान भेला हुँदैछ निर्णय गर्नुहोस्।
ग्राहक अन्तर्क्रियाको आधारमा मूल्य परिवर्तन गर्नुहोस्।
सुधार गर्न स्पट अवसरहरू।
तपाईंको डेमोग्राफिक तर्फ सामग्री तैयार गर्नुहोस्।
जबकि यो सबै आफैं गर्न सम्भव छ, तपाईलाई पूर्ण समय तपाईको व्यावसायलाई अनुकूलन गर्न यसले समय लिने छ। वास्तविक जीवनमा जस्तै, तपाईं जहिले पनि वास्तविक ग्राहकहरूलाई भन्दा बढि विन्डो शपरहरूलाई आकर्षित गर्नुहुनेछ। त्यसो भए सम्भव भएसम्म धेरै व्यक्तिलाई लिनको लागि तपाईंले आफ्नो सक्दो प्रयास गर्नु आवश्यक पर्दछ। र त्यसैले तपाइँ Semalt भाडामा लिनु पर्छ!
यदि तपाइँ तिनीहरूको केस पृष्ठ हेर्नुभयो भने, तिनीहरूले विश्वभरि सयौं कम्पनीहरूले लाभ दिन आवश्यक क्लिक-थ्रु नम्बरहरू प्राप्त गर्न मद्दत गरेका छन्। प्रत्येक केसको लिंक हुन्छ जुन निम्नमा जान्छ:
मेट्रिक पानाहरू अघि र पछाडि
तपाईंले माथि प्रदान गरेको क्लिपमा देख्न सक्नुहुन्छ, Semalt ले यी कम्पनीहरूको मासिक आगन्तुक गणना ११4 प्रयोगकर्ताहरूबाट १77१ प्रयोगकर्ताहरूमा बढायो! त्यो प्रयोगकर्ताहरूको संख्या १ 15 पटक हो उनीहरू पहिले! यो त्यो हो कि ग्राहकले उनीहरूको नतीजाको बारेमा भन्नु पर्यो:
र यदि लिखित समीक्षा र कडा स enough्ख्या पर्याप्त छैन भने, Semalt सँग भिडियो समीक्षामा समर्पित पृष्ठ पनि छ। यी समीक्षाहरू विश्वभरि सन्तुष्ट ग्राहकहरूबाट आएका छन्!
त्यसो भए कसरी Semalt तपाइँले उही परिणाम दिनुहुन्छ? तपाइँले गर्न सक्नुहुने पहिलो कुरा भनेको तिनीहरूको परीक्षण प्रस्तावको फाइदा उठाउनु हो जुन सर्जरीटीट्रटको यावुजले गरेका थिए। चाँडै तपाइँ Semalt.com मा क्लिक गर्नुभयो, तपाइँले एक बार फेला पार्नुहुनेछ जुन तत्काल तपाइँको वेबसाइटको विश्लेषण गर्नेछ। यो रिपोर्ट हेर्नको लागि, तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको खाता सिर्जना गर्नुपर्दछ। यो रिपोर्टले तपाईको वेबपृष्ठमा फेला परेका नतीजाहरूको सारांश दिन्छ र प्याकेज सिफारिस गर्दछ जसले यी परिणामहरूलाई वृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ। ती प्याकेजहरूमा AutoSEO , FullSEO , र विश्लेषणहरू समावेश छन्।
AutoSEO ले तपाईंलाई निम्न उपकरणहरू दिन्छ:
वेबसाइट दृश्यता सुधार
वेब एनालिटिक्स रिपोर्टहरू
यी सफल ब्लकहरू सफल एसईओ अभियान सुरू गर्न आवश्यक छन्! जहाँसम्म तपाईं एसईओ सिक्दै जानुहुन्छ भने पनि, स्वत: एसईओ प्याकेजमा तपाईंको लागि उपलब्ध उपकरणहरू तपाईंको वेबसाइटमा लागू गर्न सजिलो हुन्छ। यो सब भन्दा सस्तो, छिटो र प्रभावकारी प्याकेज Semalt प्रस्तावहरू हो।
तपाइँ 14 99 सेन्टको लागि १ents दिने परीक्षण खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछि, तपाईं निम्न मूल्यहरूको लागि मासिक बन्डलहरू खरीद गर्न सक्नुहुनेछ:
Month for for को लागि १ महिना
Months २77 को लागि months महिना
Months 4०4 को लागि months महिना
Year 891 को लागी १ बर्ष
पूर्ण एसईओ प्याकेजसँग सेमेल्टको एक कुशल पेशेवरले निम्न कार्यहरू गर्छन्:
यस योजनाको साथ, सेमेल्टको लक्ष्य तपाईंको वेबसाइटलाई SERPs को शीर्षमा पुश गर्नु हो। उनीहरूको एक निपुण पेशेवरलाई तपाईंको पृष्ठमा तोकिएको छ ताकि उनीहरूले तपाईंको पृष्ठलाई अत्यधिक सफल बनाउन तिनीहरूको स्रोतमा सबै स्रोतहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्। जैसा कि तपाईंले माथिको सर्जरीtr.com बाट देख्नुभयो, तिनीहरू पेज मा सिध्याउन सक्छन् र तुरुन्तै तिनीहरूको जादू काम गर्न सक्छन्।
र बस केहि मामिलाहरूमा तपाइँ उनीहरूका पेशेवरहरूको बारेमा थोरै जान्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ तिनीहरूको छविहरू वेबसाइटमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, याना शाफरेन्को (एसईओ विशेषज्ञ) र नतालिया खाचातुर्यन (सामग्री रणनीतिकार) Semalt को वेबसाइट को पृष्ठ को पृष्ठ मा "तपाइँको रैंकिंग को लागी गार्ड" को रूप मा प्रदर्शित छन्। तिनीहरू मुनि Semalt का लागि काम गर्दा उनीहरूले हासिल गरेका उपलब्धिहरूको सूचि तल छ।
तिनीहरूका धेरै विशेषज्ञहरू Semalt ब्लगका लागि लेखहरू पनि लेखिरहेका छन्। भ्लादिस्लाव पोलीकेविच (कपिराइटर), ओल्गा पायरोशेन्को (मार्केटिंग म्यानेजर), र यूजीन सर्बिन (एसईओ प्रमुख) ले हालको एसईओ प्रवृत्तिको बारेमा लेख लेखेका छन् र तपाईंको बजारको फाइदा लिइरहेका छन्। र मैले तिनीहरूसँग उल्लेख गरे कि उनीहरूसँग २ blog पृष्ठ ब्लग लेखहरू छन्? प्रत्येक पृष्ठमा articles लेख र अन्तिममा दुई लेखहरू सहित, यो कुल १२7 लेख (अहिलेको रूपमा) नि: शुल्क उपलब्ध छन्! उनीहरूको ग्राहक प्रमाणिकरण र उनीहरूको ब्लगमा नि: शुल्क प्रदान गरिएको लेख बीचमा, तपाईंसँग प्रशस्त संसाधनहरू छन् जुन तपाईंले Semalt को पूर्ण एसईओ प्याकेज खरीद गर्ने निर्णय गर्नु अघि तपाईं सन्दर्भ गर्न सक्नुहुनेछ।
पूर्ण एसईओ प्याकेज ग्राहकहरु बीच भिन्न हुन्छ, त्यसैले दुर्भाग्यवस, म तपाईलाई सिधा मूल्य दिन सक्दिन। तर मैले माथि भनें, सकारात्मक समीक्षा र सफल अभियानहरूको आश्चर्यजनक मात्राले बोल्छ कि Semalt को पूर्ण एसईओ प्याकेज मूल्यवान छ। यदि मासिक सदस्यताका लागि साइन अप गर्नुभयो भने उनीहरूले छुट पनि प्रस्ताव गर्छन्।
Months महिनाले १०% छुट दिन्छ
Months महिनाले १%% छुट दिन्छ
१२ महिनाले २%% छुट दिन्छ
र अन्तमा, त्यहाँ Semalt को वेब एनालिटिक्स प्याकेज हो, जो निम्न सेवाहरू समावेश गर्दछ:
वेबसाइट दृश्यता अनावरण गर्नुहोस्
प्रतिस्पर्धी वेबसाइटहरू अन्वेषण गर्नुहोस्
अन-पृष्ठ अनुकूलन अवसरहरू पहिचान गर्नुहोस्
विस्तृत वेब रैंकिंग रिपोर्टहरू प्राप्त गर्नुहोस्
यो प्याकेज हो जसले तपाईंलाई बताउँछ कि यदि तपाईंको सबै कामले तपाईंलाई सफलतामा डोर्याइरहेको छ वा खुलासा गर्दैछ तपाईंसँग बढि काम छ भने। यो ज्ञान बिना, तपाईं सम्भवत SERPs को शीर्षमा आफ्नो वेबसाइट चलाउन सक्नुहुन्न, वा शीर्षमा रहन सक्नुहुन्छ यदि तपाईं पहिले नै हुनुहुन्छ भने। ज्ञान शक्ति हो। र त्यो शक्ति संग, तपाईं निम्न केहि गर्न सक्नुहुन्छ:
उनीहरूले के गरिरहेका छन् भनेर हेर्नको लागि तपाईंको प्रतिस्पर्धा छोड्नुहोस्
तपाईको खोजशब्द अनुसन्धानलाई वर्तमानमा के ट्रेंड गर्दैछ तुलना गर्नुहोस्
तपाईंको आफ्नै वेबसाइट भित्र अवसरहरू पत्ता लगाउनुहोस्
मूल्य निर्धारणको सम्बन्धमा, ती प्याकेजहरू प्रस्ताव गर्दछ जुन किवर्ड र प्याकेज सीमा हुन्छ। तिनीहरू यस्तो देखिन्छन्:
Keywords / / / महिना 300 कुञ्जी शव्दहरू, projects प्रोजेक्टहरू, र months महिनाको स्थिति इतिहास
Keywords /$ / महिना १००० कुञ्जी शव्दहरू, १० प्रोजेक्टहरू, र स्थिति ईतिहासको १ वर्ष
Keywords २9 / / महिना १००० कुञ्जी शव्दहरू, असीमित परियोजनाहरू, र असीमित स्थिति ईतिहासको लागि
यदि तपाईं धेरै महिना को लागी साइन अप गर्नुहुन्छ, तपाईं निम्न बचत गर्न सक्नुहुनेछ:
सबै सकारात्मक समीक्षाहरू बीच जुन Semalt गर्वसाथ उनीहरूको वेबसाइटमा प्रदर्शन गर्दछ, उनीहरूको बहुभाषी पेशेवरहरूसँग सम्बन्धित ब्लगहरू र प्रशंसकहरू, र उनीहरूको किफायती मूल्य निर्धारण, यो सजीलै छ किन Semalt विश्वको सर्वश्रेष्ठ डिजिटल एजेन्सी हो। केवल तिनीहरूको वेबसाइट ब्राउजिंगबाट, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि उनीहरूले वास्तवमै एसईओ र एनालिटिक्सका लागि उनीहरू के गरिरहेछन् भन्ने बारे ख्याल राख्छन्